Macallin ka howl gala Premier League oo kusoo biiray musharraxiinta ugu cad cad ee qaban kara xilka macalinnimo ee naadiga Real Madrid – Gool FM
Macallin ka howl gala Premier League oo kusoo biiray musharraxiinta ugu cad cad ee qaban kara xilka macalinnimo ee naadiga Real Madrid
Ahmed Nur June 1, 2021
(Madrid) 01 Juun 2021. Wararka ka imaanaya dalka Spain ayaa sheegaya in diiwaanka macallimiinta ay dooneyso Real Madrid inay shaqada u dhiibto uu ku jiro macallinkeedii hore ee Carlo Ancelotti, kaasoo haatan hoggaamiya naadiga Ingiriiska ka dhisan ee Everton.
Raadiyaha laga dhageysto Spain ee Cadena Ser ayaa sheegay inay Madrid diiwaanka klu darsatay Macallin Ancelotti si uu xilli ciyaareedka dambe u qabto shaqada xilka uu faarujiyay Zinedine Zidane.
Sidoo kale idaacadda SER ayaa sheegtay in macallinka Taliyaaniga u dhashay uu haatan yahay musharraxa ugu cad cad ee shaqadan la wareegi kara haddii uu aqbalo ku laabasha magaalada Madrid oo intii u dhexeysay 2013 illaa 2015 uu hoggaaminayay Los Blancos.
Si kastaba ha ahaatee, tan iyo markii uu Zidane iska casilay shaqada Real Madrid, kooxda Isbaanishka ah ayaa bartilmaameed ka dhigatay Massimiliano Allegri, balse markii uu shaqada Juventus qabtay isla markaasna uu iska diiday Madrid, waxay bartilmaameed haatan ka dhiganeysaa Antonio Conte, Mauricio Pochettino, Raúl, Xabi Alonso iyo Ancelotti oo ah shaqsigii ugu dambeeyay ee ay liiska ku darsato.
Tababaraha Everton ayaa Real Madrid shaqadeeda horraan soo qabtay sanadkii 2013, waxaana uu xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay kooxda ku hoggaamiyay Champions League oo ay markeedii 10-aad qaadday, hase ahaatee, markii uu koob la’aan ku dhammeystay fasalkii xigay, waxa uu lumiyay kalsoonidii maamulka iyadoo laga ceyriyay shaqada Santiago Bernabeu.
Madaxweynaha Barcelona oo ka hadlay mustaqbalka Macallin Ronald Koeman kaddib wada xaajoodkii dhex maray labada dhinac
Manchester City oo Barcelona kala xaajooneysa saxiixa mid ka mid ah xiddigaha la filayo in laga fasaxo Camp Nou